कस्टम डिजाइन - ज़ुझाउ QLT ट्रेड कं, लिमिटेड।
UV पाउडर कोटिंग र ग्राफिक र्याप्स
हानिकारक UVA र UVB किरणहरू बाट सामग्री सुरक्षित गर्न बयान गर्नुहोस्। QLT ले सस्तो सजावटी समाधान प्रदान गर्दछ जसले तपाइँको ब्रान्डलाई अलग बनाउन र बिभिन्न उपभोक्ताहरूलाई अपील गर्न मद्दत गर्दछ। वाइनको सीमित संस्करण रन गरिरहेको छ? हामीसँग हाम्रो सजावट सेवाहरूमा कम न्यूनतम र अत्यधिक किफायती मूल्य छ। तपाईंको अद्वितीय आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गर्न हाम्रो बिक्री टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस्यहाँ हाम्रो बोतल समाप्त को उदाहरणहरू हेर्न।
ग्रेडेशन कोटिंग्स, मेटलिक फिनिश, फ्रस्टि and र एचिching्
हाम्रो धेरै सजावटी सतह समाप्त उच्च दृश्य प्रभाव को साथ एक बोतल वितरण गर्न को संयोजन गर्न सकिन्छ। कुनै खास र color वा डिजाइन खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईको ब्रान्डतर्फ बोल्छ? हाम्रो डिजाइन विभाग सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंको दृष्टि हासिल गर्न तपाईंसँगै काम गर्नेछौं। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो बोतल समाप्त को उदाहरणहरू हेर्न।
कस्टम एम्बोसिंग र डेबसिंग
रेशम स्क्रिनिंग र हट स्ट्याम्पिंग
QLT अनुकूलन मोल्ड डिजाइन मा विशेषज्ञता। हामी तपाईंको लोगो लिन्छौं र तपाईंको लागि मात्र कस्टम एम्बोस गरिएको वा डिबस्ड मोल्ड डिजाइन सिर्जना गर्दछौं! तपाईको वफादार ग्राहकहरु लाई देखाउनुहोस् जुन तपाई वास्तवमै हुनुहुन्छ र तपाईले काँचमा छाप लगाउनुहुन्छ। तपाईंको सहि आवश्यकताहरूको बारेमा हाम्रो ईन्जिनियरि department्ग विभागसँग कुरा गर्नुहोस्।